My Opnion | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » My Opnion
Posted by phone_kyaw on Jan 22, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
” စာဆိုတာ ရေးတိုင်းလည်း မကောင်းဘူးကွ။ အရမ်းပေါသလိုဖြစ်နေမယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ပုဒ်လောက်ပဲရေးရင် တော်လောက်ပြီ ”
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အဖွဲ့ ကိုလည်းကြည့်ပါအုံး။ ပညာက တပိုင်းတစ်စနဲ့ ထောင်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက်နေကြရတော့ သူတို့ တက်ကျွမ်းတဲ့အရာက ထောင်ထဲက အခြေအနေပဲ ဖြစ်မယ်လို့ တော့ ကျနော်တွေးမိနေတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ဘာများလေ့လာလိုက်စားစရာရှိလဲ။ သိတ်ပြီးများများစားမရှိပါဘူး။ ဂျာနယ်လေးဖတ်ရယုံလောက်ပဲ။ ဒါတောင် ပုံမှန်ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့လူတွေကို ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာကို သံသယဖြစ်မိနေတယ်။ ကိုဇာဂနာ ဘန်ကောက်ရောက်တော့ ရှော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါတောင်သူက ဘန်ကောက်လောက်ပဲရောက်ဘူးလို့ ။ တခြားနိုင်ငံတွေသာ ရောက်ဘူးရင် ပိုလို့ တောင် ရှော့ဖြစ်အုံးမယ်။ ဆိုတော့ ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ လုပ်တက်ပါ့မလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲ။ ဘာ့ကြောင့် ဒီမေးခွန်းကို မေးရလဲဆိုတော့ ယနေ့ ခေတ်ကာလက အနစ်နာခံတာတို့ ၊ စွန့် လွှတ်တာတို့ ထက် အရေးကြီးတာက Capacity လို့ ခေါ်တဲ့ အရာဖြစ်သလို Skills ဆိုတဲ့အရာလည်း ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လွှတ်တော်အမတ်ရွေးတဲ့အခါမှာ သေချာ သတိထားပြီး ရွေးချယ်ဖို့ တော့လိုတယ်။
အမတ်လုပ်ဖို့ က စေတနာကော.ပညာကော.အနစ်နာကော တော်တော်များများ ပြည့်စုံနေရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဂျာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရင် ၀င်ရွေးကြပေါ့..
တစ်ချိန် မဖြစ် တစ်ချိန်တော့ ဖြစ်လာမှာပဲ
လေထဲက လုပ်နေလို့ တော့ မနိပ်ဘူးဗျ
မောင်ခင်ညွန့် သနားစရာ မဟုတ်ပါ
အခု သူ့ အိမ်တော်မှာ ရွှေကွပ်ပြီး နှပ်နေပြီ..
သနားချင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင် သနားကြ
ပာုတ်တယ်ဗျ အလွန်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ အပေါ်မှာေ၇းထားသလိုပဲ ကိုမင်းကိုနိင်တို့ဆိုတာ နိင်ငံ
အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပါ အလွန်လေးစားပါတယ် ဒါပေမဲ့ ပေးဆပ်တာတစ်ခုထဲကြည့်ပြီး အားကိုးလို့မ၇ပါဘူး ။ဒီမိုကေ၇စီနိင်ငံစစ်၇င် ခေါင်းဆောင်အစွဲမထား၇ပါဘူး။ Skill ကိုလူတွေမေ့နေတာကို
ဟေ့လူ ဟိုလူဒီလူ ဝေဖန်မနေနဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုတွေး အရင်ဝေဖန်ကြည့်။
နိုင်ငံတစ်ကာကိုတောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားတွေ။မင်းတို့ လာပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ ငါတို့နိုင်
ငံတိုးတက်ရင် မင်းတို့ကို ဘုရားစင်ပေါ်တင်ပြီး နေ့တိုင်းပူဇော်နေမယ်။မြန်မာပြည်ပြန်လာရင် မီးပျက်
ကိုဘုန်းကျော်ပြောသလိုဘဲကြည့်ပါအုံး““ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုကြည့်ပါ။
တချို့ က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ ရတယ်။ တချို့ က ကျောင်းတစ်ပိုင်းတစနဲ့ ။ အများစုက
စစ်တက္ကသိုလ်ထွက်တွေပဲဖြစ်နေတယ်။ တချို့ ဆိုရင် ဆယ်တန်းတောင်မအောင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက
ရတဲ့ ဘွဲ့ ဆိုတာ ယနေ့ ကာလမှာ ဘာမှသုံးစားလို့ မရတဲ့ ဘွဲ့ ဗျာ။ ဒီလိုအရည်အချင်းမျိုးရှိတဲ့ လွှတ်တော်
အမတ်တွေများနေရင်တော့ တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာကို တွေးကြည့်ယုံနဲ့ သိနိုင်တယ်။””
ဒီအချက်ကိုတော့ အနည်းအကျဉ်းထောက်ခံပါတယ်။သို့ သော် တချို့ အမတ်တွေဆိုရင် တကယ်ကို စာတတ်၊
ပေတတ်နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ရသလောက်ကို လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီးကြိုးစားပြင်ကြမယ် ဆိုပြီးဝင်လုပ်ကြတာ။
ရ၏၊မရ၏ ကတော့ ခင်များတို့ ကျနော်တို့ ကိုယ်တွေ့ ပါဘဲ။
၈၈ မျိုးဆက်တွေဟာ လူထုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်၊တိုင်းပြည်သူ၊ပြည်သားတွေရဲ့ ကိုယ်စား
ရှေ့ ကနေ ဒုက္ခတွေကိုခါးစီးခံနေသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ ဟာပေးဆပ်နေတာ။ပျော်လို့ ထောင်တယ်ဝင်နေတာ
မဟုတ်ဘူး။ခင်များကိုယ်တိုင် သတ္တိမရှိလို့ ပြည်ပထွက်ပြေးသွားတာပေါ့။ပြည်တွင်းမှာ လာနေကြည့်ပါ၊ဒါမှမဟုတ်
ရင် ထောင်ထဲမှာ တရက်လောက် နေကြည့်ပါလား။ပျော်တယ်ဆို တစ်လ၊တစ်နှစ်နေသွားကြည့်ပါ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ—ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့ ကိုမေးကြည့်ပါ။သူတို့ ကို ဝန်ကြီးတွေ၊အမတ်တွေ လုပ်ချင်ပါ
သလားလို့ ။မလုပ်ချင်ဘူးဖြေမှာပါ။ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ခံယူချက်က ဘယ်သူတက်လာလာ
ပြည်သူ့ အစိုးရ(ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ရင်)ဆော်မှာ သူတို့ တာဝန်ပါဘဲ။သိပ်ပြီး မကြောင်ပါနဲ့ ။ကိုဘုန်းကျော်တို့ လို
စစ်ခွေးတွေရဲ့ သားသမီးတွေလို အာဏာရူးတွေချည်းမသတ်မှတ်ပါနဲ့ ဗျာ။
မယ့်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့မဖြူဖြူသင်းတို့ကိုအပေါ်ယံအမြင်လောက်နဲ့အရည်အချင်းရှိမှာမဟုတ်လောက်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုတော့ကန့်ကွက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နုနယ်ပျိုမြစ်တဲ့အချိန်တွေကိုသူတို့ယုံကြည်ရာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ရင်းထောင်ထဲမှာ၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ မြုပ်နှံပြီးကုန်ဆုံးစေခဲ့တာပါပညာသင်ဖို့(အသိအမှတ်ပြုဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိနိုင်ဖို့)အချိ်န်မရခဲ့ပါဘူး..ဒါပေမယ့်သူတို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင် အခက်အခဲပေါင်းများစွာ ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူးဒီအခက်အခဲတွေကို
တော်ရုံစိတ်ဓါတ်မျိုးနဲ့မဟုတ်တာတော့သေချာပါတယ်..ဒီစိတ်ဓါတ်တွေဒီလိုအရည်အချင်းတွေနဲ့လူတွေကသူတို့တွေရဲ့capacitybuildingနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်ပဲမနေပါဘူး…စာသင်ခန်းထဲမှာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ် အေးအေးဆေးဆေးသင်ရချင်မှသင်ရမယ်ဒါပေမယ့်သူတို့သင်ယူနေမှာပါ သေချာပါတယ်သူတို့လေ့လာသင်ယူနေကြမှာပါ ..ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ skill တွေ capacity တွေကလုပ်ယူလို့ရပါတယ် တိုင်းပြည်
အတွက်လူတွေအတွက်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရဲတဲ့စိတ်တွေ စေတနာတွေက လုပ်ဖို့မလွယ်လှပါဘူး သူတို့မှာဒါ
တွေကရှိပြီးသားပါ (ခပ်သောသောလေးပြောရရင် သူတို့လည်းခေသူတွေမှမဟုတ်ဘဲဗျာ နော့် ကိုဘုန်းကျော်ရယ်)…mandalay gazette ကိုပုံမှန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ post တွေလည်းဖတ်ပါ
တယ် ဒီတစ်ခါတော့ agree to disagree နော်………
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာ ပညာတတ်အတ္တသမားတွေထက်စာရင် ပညာမတတ်ပရဟိတသမားတွေပဲဦးဆောင်ခဲ့လို့ ကောင်းတဲ့(အများလက်ခံတဲ့)အခြေအနေဘက်ကိုယိမ်းသွား ခဲ့တယ်ခင်ဗျ…ကျွန်တော်သိတာကတော့ အခုလက်ရှိအခြေအနေကို မြဲမြဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်မဲ့လူတွေလက်ထဲ ကိုရောက်နိုင်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားဖို့ပဲ။ အဲဒိအချိန်မှာပဲ ပညာရေးအတွက် ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာ ပညာလဲတတ် အတ္တကင်းတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့အဓိကပဲ။
There arealot of non-graduates in the history who outperformed normal graduates,
President Abraham Lincoln is notagraduate but an ambitious self learner
Bill Gates , who changed the computer world and IBM, isadrop-out from Harvard,
U Thant of Burma, who served as UNSG, is notagraduate
General Aung San is also notagraduate and Lula, who was the president of Brazil from 2003 to 2010, who made Brazil one of the most promising developing countries is notagraduate.
They are just an example and there are many more real life examples. But what really matters is the resolution/determination of each and every leader, their wisdom( not only university education) , vision, sincerity and open-mindedness. If we madeacomparison between Min Ko Naing and Mo Thee Zon, it wouldn’t be fair just merely to compare their degrees, the ability to becomeapolitical leader or qualifications for the leadership demands much more …
for myself, though I have some confidence in myself, I don’t want to criticize both MKN and MTZ becoz I don’t have sufficient knowledge of both. Makingablind comment prematurely without knowing in-depth about any person would be like shooting into the dark….
I couldn’t agree more with your opinions stated in your comment.
သဘောတူ တစ်ဝက် မတူ တစ်ဝက် ပဲ။ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်မဲ့သူဟာ ပညာတတ်၊ လူတော်ဖြစ်သင့်တာ အင်မတန် သဘာဝကျ ပါတယ်။ အစ္စရေး နိူင်ငံထူထောင်တော့ ရှေ့ တန်းကနေ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသူတွေ နေရာမရဘူးလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ နိုင်ငံရေး နဲ့ ဥပဒေ ကို လေ့လာထားကြသူတွေကို နိုင်ငံကို အဓိကထား နေရာပေးကြတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ လေ့လာလိုက်စား ထားတဲ့သူတွေဆိုတာ ဟားဗတ် တို့ အောက်စဖို့ တို့ကနေ ဘွဲ့ရထားတဲ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး(ပါရင်လဲပါမယ်ပေါ့)။ ကိုမင်းကိုနိုင် က ထောင်ထဲမှာ ဂျာနယ် လောက်နဲ့ အချိန်တွေဖြုန်းခဲ့မယ်လို့ ကျနော်ကတော့ လုံးဝ ထင်မထားပါဘူး။ သူက ရဲရဲတောက် ခံယူချက်နဲ့ ဘ၀ ကို စတေးပြီး မြန်မာ ပြည်သူတွေအတွက် လုပ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူပါ။ ကျနော်အသေအချာပြောရဲတာက သူ့ဓါး(ပြည်သူတွေအတွက်ဓါး) ကို သူ အမြဲ သွေးနေမဲ့ သူပါ။ သူ့ အရည်အချင်း အမှန်ကိုသိချင် သူပြောတာဆိုတာတွေ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ မာစတာ ရတာ တစ်ခုထဲနဲ့ တော့ ခေါင်းဆောင် မဖြစ်ထိုက်သေးပါဘူး။ အရည်အသွေး အစစ်အမှန် ဆိုတာ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိသလောက် ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ မျိုးမှာတောင် ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုမှ အရည်အသွေး အစစ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မဖြူဖြူသင်း ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ စစ်မှန်တဲ့အရည်အချင်း တွေပါ။ အန်တီစုတောင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်လာတော့ မဖြူဖြူသင်း ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာပြီး ချီးမြောက်ခဲ့တာ အလကား မဟုတ်ပါဘူး။ လူတတ်လုပ်ပြီးတော့ ၀င်ဆွေးနွေးတာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ပိုင် အမြင်လေးကို ၀င်ပြီးတင်ပြတာပါ။